Lapel Pin, Medal Sport, Metal Keychain - Kingtai
Kingtai craft ngwaahịa mmachi ụlọ ọrụ, The china Famous metal craft emeputa, nke nwere ihe karịrị afọ 20 dị iche iche crafts mmepụta ahụmahụ, ya kpam kpam mwekota nke ụlọ ọrụ na ahia ụlọ ọrụ, si otú anyị nwere ma tozuru okè imewe otu na azụmahịa otu.
Akụkụ dị mkpa mkpụrụ ego ihe ncheta anyị bụ ihe ịchọ mma pụrụ iche na nke bara uru, nke nwere ike ịbụ nke ...
Ihe Kachasị Mma Jiri nrite ndị a zuru oke maka mkpụrụedemede “ịkpụ apụ” ma ọ bụ atụmatụ eji dimens ...
Akụkụ dị mkpa Ihe nkedo a na-atụkarị anyị nwere nwere 3D mma, nke dị na brigh ...
Na ihe karịrị afọ 10 nke ahụmahụ na metal nkà na crafts ngwaahịa n'ichepụta, anyị nwere a zuru ezu onye-nkwụsị ọrụ, si imewe ka okokụre ngwaahịa, nke mere na ị pụrụ zuru ike.
Mgbe niile na-etinye mma na akpa ebe na-erube nnọọ na-elekọta ngwaahịa mma nke ọ bụla usoro.
Kemgbe ọ malitere ， Ikike na patenti anyị nwetara karịa 30, ọtụtụ n’ime ha bụ Disney, Wal-Mart, Harry ọkpụite, Universal Studio, SGS, FDA na ISO9001.
Kingtai craft ngwaahịa mmachi ụlọ ọrụ, nke nwere ihe karịrị afọ 20 dị iche iche crafts mmepụta ahụmahụ, ya kpam kpam mwekota nke ụlọ ọrụ na ahia ụlọ ọrụ, si otú anyị nwere ma tozuru okè imewe otu na azụmahịa otu.
KingTai nke oge a na - arụ ọrụ nwere ebumnuche ndị ahịa, ma sorokwa na ngosipụta Canton Fair na Hong Kong gosipụtara ọtụtụ afọ. Anyị na-enye ezi ọrụ maka ndị ahịa ， ma na-enwe ọhụụ na okwukwe nke ọmarịcha ihe okike